Halkan Ka Akhriso Nuxurka Khudbadii Madaxweyne Siilaanyo Ee Xuska 18 May | Baligubadlemedia.com
Halkan Ka Akhriso Nuxurka Khudbadii Madaxweyne Siilaanyo Ee Xuska 18 May
Hargeysa(BGM) Madaxweynaha Somaliland ayaa xuska sanad guuraada 26aad ee dib u la soo noqoshada madax banaanida Somaliland ka hadlay, waxaanu madaxweynuhu khudbad dheer oo uu hada ka jeediyey xarunta mamdaxtooyada kaga hadlay arrimo badan oo khuseeya mandaqada.
Dhoofka Xoolaha Nool oo laf-dhabar u ahaa dhaqaalaheena, isla markaana ahaa waxa ugu weyn ee aynu dhoofinno, oo la joojiyey. Taasi waxay keentay in aynu ku weyno lacagtii adkayd ee aynu ka heli jirnay, oo aan ka yarayn Saddex Boqol oo Milyan oo Dollar sannadkii.
Waxa intaa dheer, innaga oo aan wax soo saar iyo tacab kale u feydan, iska daa waxaynu dunida u dhoofinnee, ab iyo isir khudraddii aynu beeran jirnay, ee dhulkeenna kala soo bixi jirnay, waxaynu maanta ka soo iibsannaa dalalka aynu deriska nahay.
Si looga midho dhaliyo mashruucan qiimaha badan, waxaan magacaabay, Guddi Qaran oo ka kooban noocyada kala duwan ee Bulshada, culimo aw diin, ganacsato, ururada bulshada rayidka ah, Xisbiyada mucaaridka ah iyo xubno ka tirsan Xukuumadda